भग्नावशेष बन्यो ‘एसियाकै पहिलोे’ सुरुङमार्ग
बैंकभित्रबाटै लुटियो ग्राहकको १७ लाख, सुरक्षा गार्ड हेरेको हेर्‍यै
उपत्यका भित्र २० बस थप्दै साझा यातायात
८२ अर्बको सुनकोशी-मरिन वहुउद्देश्यीय डाइभर्सनको काम चालु आवमै
तनहुँ जलविद्युतबाट सीएमसीलाई हटाइयो, चैतभित्रै नयाँ टेन्डर
कोही नठगिने गरी मलेसियामा रोजगारी खुल्छ : राजदूत पाण्डेय
कहाँनेर चुक्यो सरकार समृद्धिको रफ्तारमा ?
कहाँनेर चुक्यो सरकार समृद्धिको रफ्तारमा ?Anusha
‘कानुनका नौ सिङ’ भनेजस्तो, हेर्दा केही न केही, तर त्यही कानुन ओली सरकारका हरेक क्याबिनेट बैठकमा टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । जनताका आकांक्षा यति धेरै छन् कि सबैलाई शीघ्र र सहज सेवा प्रवाह चाहिएको छ । तर, सबै कुरामा ढिलाइ छ । हामी पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई मात्र दोष देखाएर पन्छिने मनोबृत्तिका छौँ ।
नेपाल लगायत विदेशी कामदार लैजाने प्रक्रिया पुरानैAnnapurna
मलेसिया सरकारले गठन गरेको विदेशी कामदार व्यवस्थापन समितिले पाँच महिनाको अध्ययनपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। त्यहाँका पूर्वन्यायाधीश दातुक सेरी हिसामुद्धिन युनुसको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिले नेपाल लगायत विदेशबाट कामदार लैजाने प्रक्रिया पुरानै हुनुपर्ने प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिएको छ।
नारायणी नदी र गण्डक ब्यारेजमा पानीजहाजको सम्भाव्यता अध्ययनNeelam
नेपालका प्रमुख तीन ठूला नदी कोशी, गण्डकी र कर्णालीमा पानीजहाज सञ्चालन गर्ने सम्भावनाअन्तर्गत गण्डकीको नवलपरासीमा सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छ । नेपाल र भारतका उच्चस्तरीय अधिकारी सम्मिलित संयुक्त टोलीले सोमबार नारायणी नदी सहित गण्डक ब्यारेज र गण्डक क्षेत्रअन्तर्गत १२ नं स्परको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको छ ।
नेपाली औषधि उद्योग : फैलिँदा पनि जहाँको त्यहीँAnkit
आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा नेपालमा १६ अर्ब ५८ करोड र आ.व. ०७४/७५ मा १८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको स्वदेशी औषधि कारोबार भएको तथ्यांक छ । ०७३/७४ मा नेपालमा २१ अर्ब ९५ करोड र ०७४/७५ मा २५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँको विदेशी औषधिको कारोबार भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।नेपाली औषधि बजार करिब २ अर्बले बढ्दा विदेशी कम्पनीहरुको कारोबार ४ करोडले बढेको छ ।
ठूला पुलमा नयाँ निर्माण मोडालिटी : ‘डिजाइन एन्ड बिल्ड’Ankit
सडक विभागले अब ठूला र महत्वपूर्ण नदीहरुमा बन्ने पुलको निर्माण ‘डिजाइन एन्ड बिल्ड’ मोडालिटीमा गर्ने योजना तयार गरेको छ । नेपालमा सुरु भइसकेको यो मोडालिटीलाई क्रमशः फैलाउँदै जाने योजना विभागले तयार गरेको हो । यसअनुसार काम हुँदा पुलको डिजाइनको काम पनि ठेकेदारले नै गर्छ ।
नेपाल र बंगलादेशबीच दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौताAnkit
नेपाल र बंगलादेशबीच दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता भएको छ । दुबै दशेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पारित गरेपछि मंगलबार अर्थमनत्रालयमा कर उन्मुक्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो ।अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको उपस्थितिमा राजश्व सचिव लालशंकर घिमिरे र बंगलादेशका राजश्व सचिव मसर्फ हुसेनले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे ।
भारतीय सामान आयातमा भन्सार छुट रोक्ने ट्रम्पको चेतावनीAnkit
छिमेकी पाकिस्तानसँग तनाव झेलिरहेको भारतलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले झट्का दिएका छन् । यद्यपि, यो भारत-पाक तनावसँग सम्वन्धित विषय भने होइन । राष्ट्रपति ट्रम्पले भारतको वैदेशिक व्यापार नीतिको कडा आलोचना गरेका छन् । उनले भारतबाट आउने करोडौं डलरको ड्यूटी फ्री सामानमा रोक लगाउने समेत घोषणा गरे ।
लक्ष्यभन्दा ७ वर्ष ढिला तयार भयो कुलेखानी-३, लागत दोब्बरAnkit
मकवानपुरमा १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रोको निर्माण सकिएको छ । तर, आयोजनाले अझै परीक्षण उत्पादन सुरु गरेको छैन ।आयोजनाका प्रमुख सुवासकुमार मिश्रका अनुसार निर्माणको काम सकिएर अब पूर्वाधारहरुको परीक्षण भइरहेको छ । हाल निर्माण भएका संरचनाको अवस्थाबारे चेकजाँच भइरहेको छ । यसपछि बिजुलीको परीक्षण उत्पादन थालिनेछ ।
सेयर बजारले नरुचाएको कम्युनिष्ट सरकारAnkit
केपी शर्मा ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएको एक वर्ष पूरा भइसकेको छ । ३ फागुन ०७४ मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुने पक्का भएपछि अघिल्लो दिनबाट घट्न थालेको सेयर बजारमा अझै सुधार देखिएको छैन । अनौठो के भने ओली प्रधानमन्त्री बनेको दिन चाँहि सेयर बजारमा हल्का सुधार आएको थियो ।
आयल निगमले भन्यो : ग्यास पर्याप्त छ, हल्लाको पछि नलागौंPrajwal
मागअनुसार खाना पकाउने ग्यासको आयात भइरहेकाले अनावश्यक भण्डारण नगर्न तथा गलत हल्लाको पछाडि नलाग्न नेपाल आयल निगमले उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ । पछिल्ला दिनमा ग्यासको कमिसन बढाउनुपर्ने माग राख्दै नेपाल ग्यास बिक्रेता सङ्घलगायतले विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको तथा निगम र व्यवसायीबीचको वार्तासमेत तार्किक निष्कर्षमा पुग्न नसकेको बेला निगमका तर्फबाट उक्त धारणा सार्वजनिक भएको हो ।
पोखराको कथा : लेकसाइड मध्यरातसम्म गुल्जार, अन्यत्र ९ बजे नै डन्डाPrajwal
लेखक गनेस पौडेल भन्छन्, ‘पोखरा भनेको संस्कृति हो, कुनै एक ठाउँ वा स्थान होइन ।’ कवि तीर्थ श्रेष्ठ कालीगण्डकीदेखि मर्स्याङ्दी बुढीगण्डकीसम्म समेटिएको संस्कृतिलाई पोखरा मान्छन् । हुन पनि विदेशमा भेटिने लमजुङ, तनहुँ, स्याङ्जा वा पर्वत र म्याग्दीका मानिसहरु घर सोध्ने हो भने छोटो उत्तर आउँछ, पोखरा । पोखरा कहाँ भनेर सोधे भने बल्ल जिल्लाको नाम र ठाउँ भन्छन् ।
नेपालले जापानसँग माग्यो कामदारको लागि भाषा परीक्षाको ‘कोर्स’Prajwal
नेपालले कामदारका लागि भाषा परीक्षाको ‘कोर्स’ स्पष्ट गरिदिन जापानसँग आग्रह गरेको छ । जापानी भाषा सिकाउने इन्स्टिच्युटले यसका नाममा ठगी गर्न सक्ने र कामदारलाई पनि अन्योल हुने भएकाले भाषा परीक्षाको सम्भावित कोर्स उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले आग्रह गरेको हो ।
जाग्यो रानीपोखरी पुनर्निर्माणको आशPrajwal
शिलान्यास भएको तीन वर्षसम्म अलपत्र रहेको रानीपोखरीमा सोमबार विहानै महिलाहरुको एउटा डफ्फा धमाधम झार उखेलिरहेका थिए । केही पुरुषहरु उनीहरुलाई सघाइरहेका थिए, जसमध्ये एक थिए भक्तपुरका कृष्णप्रसाद दुमरु । उनी पेशाले कालिगढ हुन् । उनकै नेतृत्वमा भक्तपुरको भाजुपोखरी उपभोत्ता समितिमार्फत जिर्णोद्धार भइरहेको छ ।
वीरगञ्जमा आधुनकि प्रणालीबाट घर नम्बरिङ सुरुSandesh
वीरगञ्ज महानगरपालिका अन्तर्गत रहेका घरधुरीको ‘मेटि्रक्स एड्रेसिङ सिस्टम’बाट नम्बरिङ सुरु गरिएको छ । जसअन्र्तगत वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नंम्बर १ देखि १६ सम्म नम्बरिङ सम्पन्न भएको छ । महानगर भित्रका घरलाई व्यवस्थित बनाउन र नम्बरबाटै पहिचान हुने बनाउन आधुनिक हिसाबले घर नम्बरिङ गरिएको वीरगञ्ज महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
‘युरोपमा नेपाली एयरलाइन्समाथिको प्रतिवन्ध हटाउन झनै मुस्किल’Roshan
नेपाली उड्डयन अधिकारीहरुको भनाइ मान्ने हो भने अब युरोपेली युनियन (ईयू)को कालोसूचीबाट हट्न नेपाललाई झनै मुस्किल हुनेछ । उड्डयन क्षेत्रकै विभागीय मन्त्री र दुई बरिष्ठ उड्डयन अधिकारीहरुको बुधबार हवाई दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि नेपाललाई कालोसूचीबाट हट्न चुनौति थपिएको हो ।
टुंगिएन पञ्चेश्वरको विवाद, नेपाल र भारतको आफ्नै अडानमाRoshan
नेपाली कामदारले किन अझै मलेशिया जान पाएका छैनन्?
रोकिएन सेयर बजारमा गिरावट
नारायणी नदी र गण्डक ब्यारेजमा पानीजहाजको सम्भाव्यता अध्ययन
नेपाली औषधि उद्योग : फैलिँदा पनि जहाँको त्यहीँ
ठूला पुलमा नयाँ निर्माण मोडालिटी : ‘डिजाइन एन्ड बिल्ड’
बजार हिस्सा गुमाउँदै नेपाल वायुसेवा निगम